China HDPE biogas sheet kwemveliso kunye Factory | Lonovae
I-HDPE eveliswa yinkampani yethu isetyenziswa ikakhulu kumachibi angengawo, kumachibi okuloba iintlanzi, nakuzo zonke iindawo ekufuneka zingangenwa. Ubungakanani befilimu bunokuba yi-0.2-2.0 mm. Icandelo eliqhelekileyo eliqhelekileyo li-6 * 50 yeemitha kunye ne-300 yeemitha zesikwere. Ubunzima yi-1 ukuya kwi-0.8 mm. Ukwahlulahlulwa kwibhodi engenamanzi kunye ne-membrane engenakungena, iimveliso: kubandakanya i-LDPE geomembrane, i-LDPE geomembrane, i-HDPE geomembrane, i-EVA geomembrane, i-ECB geomembrane, i-PVC geomembrane, i-geomembrane yomphezulu, njl.
Igama IHDPE geomembrane
Ububanzi 3m-8m （6m kwintsholongwane ner
Ubude 6-50m （njengoko wena
Ukuxinana 950kg / m³
Izixhobo IHDPE / LDPE
Ukusetyenziswa Biogas, Pond yeentlanzi kunye neChibi lokufakelwa njl.
1. IHPEPE geomembrane yinto eguqukayo engenawo manzi enokungalingani okuphezulu (1 × 10-17 cm / s);
2. IHPEPE geomembrane inokumelana kakuhle nobushushu kunye nobushushu, kunye nokusetyenziswa kwayo kubushushu obuphezulu be-110 ℃, ubushushu obuphantsi -70 ℃;
3. IHPEPE geomembrane inokulunga kwemichiza kwaye inokumelana nokubola kwe-asidi eyomeleleyo, ialkali kunye neoyile. Yinto efanelekileyo yokulwa ne-corrosion;
4. IHPEPE geomembrane inamandla aphezulu eqine, ukuze ibenamandla aqinileyo okuhlangabezana neemfuno zeeprojekthi zobunjineli ezikumgangatho ophezulu;
5. I-HDPE geomembrane inokuxhathisa kwesimo sezulu esomeleleyo, ukusebenza okuchaseneyo nokuguga, kwaye inokugcina ukusebenza kwantlandlolo xa ivezwe ixesha elide;
6. Ukusebenza ngokubanzi kwe-HDPE geomembrane. I-HDPE geomembrane inamandla oqinileyo kunye nobude ngexesha lekhefu, elenza i-HDPE geomembrane ukuba isetyenziswe phantsi kweemeko ezahlukeneyo zemozulu kunye nemozulu. Lungisa ukuhlala ngokulingana komhlaba, ubunzima obomeleleyo!
7. IHPEPE geomembrane yenziwa ngeplastikhi ekumgangatho ophezulu yeplastiki kunye necarbon amasuntswana amnyama awanazo naziphi na izinto ezisigcinayo. I-HDPE isetyenzisiwe kwilizwe lam ukubuyisela i-PVC njengempahla eluhlaza yokupakisha ukutya kunye nefilimu yokutya.
1 Ukulwa ukungcola komhlaba kwiindawo zokulahla inkunkuma, ugutyulo lwelindle okanye kwiindawo zonyango lwenkunkuma.
2. Imijelo yemilambo, amadama echibini, amadama okugcina amanzi amdaka, amadama okuhambisa amanzi amdaka kunye neendawo zokugcina amadama, imijelo, amadama (imigodi, imigodi).
3. Imigca engaphantsi komhlaba, ulwakhiwo olungaphantsi komhlaba, iitonela kunye namatonela.
4. Umgaqo wendlela kunye nezinye iziseko zinetyiwa kwaye zinqanda ukopha.
5. Ukugquma kunye ne-inshorensi ethe tyaba yokuthintela ukopha phambi kwedama, umaleko othe nkqo wokuthintela ukomelela komhlaba, isiseko sokwakha i-cofferdam, iyadi yempahla yenkunkuma.
6. Iifama zamanzi olwandle kunye namanzi acocekileyo.
7. Isiseko seendlela, noohola bendlela; umaleko wokungena manzi womhlaba obanzi kunye ne-loess ewayo.
8. Ukuthintela ukuvulwa kophahla.
Egqithileyo Ikreyiti yeziqhamo zemifuno
Okulandelayo: pp ibhodi yeselula yokwenza izinto
PP umgquba Ukususa iibhanti